နှိုးစက်ပဟေဠိနာရီအခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » နှိုးစက်ပဟေဠိနာရီ
နှိုးစက်ပဟေဠိနာရီ APK ကို
★★ဒီနှိုးစက်နာရီကိုအခြားသူများမပွုသောအရာကိုမ - ဤစကားမှန်အသိ၌သင်တို့ကိုနှိုး! 🙂★★အဆိုပါနှိုးဆော်သံနာရီတစျခုအရာလုပ်ဖို့ရည်ရွယ် - နှငျ့သငျနိုးထဖို့ ie ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုမှေးရန်လေ့သို့မဟုတ်ရိုးရိုးနှိုးစက်နဲ့အိပ်စက်မှုကို turn off ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေသောနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နိမ့်ဆုံးအလုပ်လုပ်အဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် App ကိုသင်တက်ရမသေချာစေသည် !! ဘယ်လိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဘူး - ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုပုံမှန်ပျမ်းမျှအားဉာဏ်အဆင့်ကိုနှင့်အတူအလွန်လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေမယ့်သင်သိသောကြောင့်စိတ်ကိုပင်ရိုးရှင်းသင်္ချာပဟေဠိသေချာသင်သည်သင်၏ရမရာဖြစ်စေမည်သည့်နေရာတွင်တစ်ပြည်နယ်ထဲမှာတည်သည်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းတဲ့သင်္ချာပဟေဠိပြသ သင်ကဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှစစ်မှန်တဲ့သဘောနှိုးအဖြစ်အသိ။
►Beautifulအချိန် display ကို။
လြယ္ကူ interface ကိုသုံးစွဲဖို့►။
နှိုးဆော်သံဂီတ၏ Excellent ကစုစည်း►။
► Volume ကိုမြည်ဟီးရိုက်ခတ် - နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိုးဆော်သံအသံအတိုးအကျယ်ကိုတက်တချက်။
►ပဟေဠိဖြေရှင်းဒါမှမဟုတ်နှိုးဆော်သံမှေးသို့မဟုတ်ပယ်ချဖို့ captcha ရိုက်ထည့်ပါ။
တိုင်းနှိုးဆော်သံနှင့်အတူကျပန်းပဟေဠိသို့မဟုတ် captcha ►။
တစ်မှေးအိပ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုတောင်းတစ်မှေးအိပ်ကြိမ်► Options ကို။
လှပသောဒီဇိုင်းအချိန်မှတ်နာရီနှင့် timer နေရာမှာ►
ဤသည်ကိုဒေါင်းလုဒ်တန်ဖိုးရှိ app တစ်ခုပါ! လုပ်သာလုပ်!
4.61 ကို MB
Phonato Studios က Pvt ။ Ltd. ,
Wakey - နူးညံ့သိမ်မွေ့ & ...
NAP နှိုးစက် (နားကြပ်နှိုးဆော်သံ)